Vaovao - tsipika fitrandrahana fantsom-pifandraisana PE multi-layer
Ny tsipika fantsom-panafody multi-layer PE dia afaka manamboatra fantsona 2, 3, 4, 5 amin'ny alàlan'ny fitrandrahana masinina maromaro.
Ho an'ny famokarana fantsom-bozaka maro sosona, arakaraka ny habetsaky ny sosona, arakaraky ny habetsaky ny fitaovana, no mahasarotra ny famokarana. Ny sosona samihafa dia hanana fahasamihafana samihafa ihany koa. Ho an'ny fantsona telo sosona, misy karazany roa. Ny ABA sy ny ABC dia mitaky extruders roa sy telo mba hiara-hivoaka. Ho an'ny fitaovana, sarotra kokoa ny ABC ary ny vidin'ny fitaovana dia avo lavitra noho ny ABA.
Ny fantsom-pandrefesana PE maro sosona dia ampiasaina indrindra amin'ny famatsian-drano sy ny fivoahan'ny rano, ny fanondrahana fambolena, sns. Amin'ny alàlan'ny fitaovana sy sosona samihafa, afaka mampihena ny vidiny, mampitombo ny tanjaka ara-batana ary mampitombo ny antioxidant.
Ho an'ny tsipika famokarana fantsom-pifangaroana iraisana, ny fiasa lehibe indrindra amin'ny tsipika famokarana fantsom-bokatra avo lenta dia ny fahombiazana avo sy ny fitsitsiana angovo. Eo ambanin'ny fahitana mitovy amin'ny fahaizan'ny extrusion, kely kokoa ny visy, ambany ny fahombiazan'ny angovo, ary voatahiry kokoa ny tranokala sy ny asa.
Raha ampitahaina amin'ny vanim-potoana mitovy amin'ny vanim-potoana iray ihany, ny output an'ny 60/30 extruder tokana tsotra dia 100kg isan'ora fotsiny, raha toa ka mihoatra ny 350 kg isan'ora ny fihoaram-pahefana haingam-pandeha tokana 60/38. izay mitovy amin'ny fahombiazan'ny ankapobeny amin'ny telo sy sasany. 2,8 heny fotsiny ny fanjifana angovo amin'ny an'ny extruder mahazatra, ary ny tahan'ny fanjifana angovo dia nitombo efa ho 25%. Mihena be ny fanjifana angovo, manatsara ny fahombiazan'ny vokatra ary mihena be ny habaka famokarana.
Ny tsipika famokarana fantsom-piraketana PE multi-layer dia afaka mamokatra savaivony 20-1200mm, ary ny famaritana ny extruder volo tokana mahomby indrindra dia 50/38, 60/38, 75/38, 90/38120/38150/38. ny fahafaha-mitrandraka dia 200-1200kg / h, ary ny motera extruder dia 55kw-550kw, hahafahana mamaly ny filan'ny mpanjifa misy savaivony pipa samy hafa.